Maxkamada Hargeysa oo xukuntay Gabar uu xiray Wasiirka Madaxtooyada Somaliland • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Maxkamada Hargeysa oo xukuntay Gabar uu xiray Wasiirka Madaxtooyada Somaliland
Maxkamada Hargeysa oo xukuntay Gabar uu xiray Wasiirka Madaxtooyada Somaliland
February 12, 2013 - By: Khalid Yusuf
Nadra Maxamed Jaamac ayaa bishii lasoo dhaafay ee Janaayo lagu xiray xabsiga Hargeysa kadib markii uu dacweeyey Wasiirka Madaxtooyada Somaliland Xirsi Cali Xaaji Xassan.
Wasiirka ayaa ku eedeyey haweenaydan Nadra inay fariimaha Telefoonka ugu soo didhay hadalo cay iyo hanjabaad isugu jira, isagoo sheegay in uu adkeysan waayey hadalada uu sheegay inay ka baxsanaayeen dhaqanka oo si joogta ah telefoonkiisa ugu soo dhici jiray.
Ehelada Nadra ayaa iyagu dhankooda si weyn uga hadlay jirdil gabadhaasi loo geystay, isla markaana xabsiga weyn lagu hayey intii maxkamada socotay iyo waliba muddo dheer kahor intaan danbiga lagu soo oogin.
Maxkamada Hargeysa ayaa maanta ku xukuntay muddo 8 bilood ah gabadhan Nadra Maxamed Jaamac, oo iyadu hada muddo bil ah xabsiga ku jirta.
Wasiirka Madaxtooyada Somaliland Xirsi Cali Xaaji
Xariga Nadra ayaa ah mid si weyn looga hadal hayey magaalada Hargeysa, waxaana labo todobaad kahor markii maxkamada bilaabatay xubnihii Maxkamada ka hor hadlay kamid ahaa Wasiirka Xirsi Cali oo eedeynta kusoo bandhigay halkaasi xili amniga maxkamada iyo wadooyinka hormara si weyn loo adkeeyey.
Hay’adaha u dooda xuquuqul Insaanka ee ka jira Somaliland ayaa sheegay in xariga Nadra uu astaan u yahay cadaalad xumada ka jirta Garsoorka Somaliland iyo waliba ku takri falka awooda dowlada ee uu adeegsaday Wasiirka Madaxtooyada Somaliland.
Xirsi Cali Xaaji Xassan ayaa isagu sheegay inuu ku qanacsan yahay in xabsiga la geeyo gabadhaas aflagaadeysey sida uu sheegay, isla markaana ay tahay in la edbiyo qof walba oo caaya Madaxda Qaranka waa siduu hadalka u dhigayee.